HERNIA CAGAARSHOW EE WEYLAHA: WAXA AY U EG TAHAY, WAXA LA SAMEEYO, SIDA LOO DAAWEEYO - XOOLAHA
Hernia Cagaarshow ee kubka: calaamadaha iyo daaweynta
Caloosha, sida xayawaanka qaangaarka ah, waxay jiri karaan jirro, kuwaas oo si xun u saameeya waxsoosaarka xoolaha. Cudurada aan la-qaadin waxaa ka mid ah cudurada jahwareerka ah ama cudurada hidda.
Hernia cagaarshow waa mid ka mid ah kuwan. Inkastoo xaqiiqda ah in cudurrada noocaas ahi aanay khatar u ahayn kuwa kale, waxaa muhiim ah in la ogaado tallaabooyinka la qaadayo.
Waa maxay cudurkan
Hernia waa kor u kaca peritoneum iyada oo loo marayo giraanta xundhurta, waxay noqon kartaa dhalasho ama la helaa. Dumarka ayaa sabab u ah horumarka aan caadiga ahayn ee ilmaha caloosha ku jira xilliga dhalmada. Biyuhu wuxuu halis u yahay sababta oo ah isku-buufinta unugyada waxay u horseedi kartaa dillaacooda, geedi socodka bararka daran iyo peritonitis. Jaantuska hernia (A) iyo prolapse jidhka (B): 1 - dabiiciga jilicsan; 2 - Qoryaha cagaarka; 3 - Waxyaabaha Hernial; 4 - xuubka dibadda; 5 - qoorta hernia; 6 - jidhka hernia; 7 - hoose ee bacda herni; 8 - unugyo qasab ah.
Waa maxay sababta ay u dhacdo ee weylaha
Cilladaha unugyada peritoneum ama ballaarinta jilicsanaanta xummadda waxay keenaysaa inay ku dhasho. Qaadashada waxaa laga yaabaa inay uur yeelato sababtoo ah dhaawaca caloosha, tusaale ahaan, taasoo ka dhalatay hoos u dhac iyo garaacis.
Waa muhiim! Dibbeddelka cudurkaan wuxuu leeyahay dhibaatooyin la xidhiidha qashin-qubka, sidaa daraadeed way ka sii darsantaa oo kobcisaa miisaanka. Ilmo dhasha ayaa u dhiman kara xanuunka.
Maxuu hernia u egyahay (muuqaal) dibi
Astaamaha dabeecadda ee cudurku waa kor u kaco caloosha oo ah qaab caano.
Hase yeeshee, haddii aysan jirin wax cillad ah, xayawaanku wuxuu muujinayaa walaac, ma cuno cunto fiican, xanuun ku dhaca caloosha hoostiisa, wuxuu leeyahay dhibaatooyin faaruqinta saxarada, markaa astaamahani waxay sidoo kale muujin karaan jiritaanka hernia.
Waxa la sameeyo, sida loo daaweeyo
Hernia waxay noqon kartaa mid la jabin karo oo aan dib loo noqon karin. Ilmo illaa 1 sano jir ah, way kufin kartaa isaga qudhiisa, sidaa daraadeed uma baahna waxqabadka banaanka.
Ma taqaanaa? Qaybta ilmagaleenka ee lo'da gudaha waa dalxiis - dibi weyn oo ba'an. Tours ayaa ku noolaa Yurub iyo Aasiya.
Daaweynta xasaasiga ah
Inta lagu jiro daaweynta, dhakhtarka xayawaanka ayaa duubaya aagga xuddunta si loo nasteexo murqaha isku midka ah. Kadibna, si fudud u cadaadida hernia, waxay gelisaa daloolka, ka dib markii xuddunta la shaabadeeyay cajalad iyo saaro faashad. Si loo hubiyo meesha saxda ah ee xubnaha, dibi waxay u baahan tahay inay bixiso nasasho nasasho iyo qadar yar oo cunto ah.
Waa muhiim! Ha isku dayin inaad saxdo naftaada! Ma ogaan kartid haddii ay tahay mid la yareeyo.
Daaweynta qalliinka ee cudurku marka uu dhaco in laga soo bilaabo giraanta xundhurta ayaa kor u qaadeysa qayb ballaaran oo mindhicir ah ama waa la jiiday. Si looga hortago necrosis unugyo, qalliin ayaa loo sameeyaa si loo saxo cilladda. Qalabka peritoneum ayaa la gooyaa suuxdinta gudaha, caleemaha jeexan ayaa la saaraa, xubnaha jidhkuna dib ayey u noqdaan. Kadibna meeshii la jeexay waa la jaraa.
Akhri sida loo doorto kubka marka la soo gadanayo, sida loo quudiyo xayawaanka iyo waxa la sameeyo haddii ay jirto cillad aan fiicnayn.
Daryeelka dambe ee dambe
Muddada uurku wuxuu soconayaa 10 maalmood. Waqtigaan, xayawaanku wuxuu u baahan yahay inuu hubiyo nabadda. Qashin-qubka waa inuu ahaadaa mid qalalan oo nadiif ah, cabo - baaxad, iyo cunto - si sahlan loo cuno. Xilliga postoperative waxaa la socon kara caabuq iyo qandho. Si aaney u seegin waqtigan iyo daaweynta caabuqa waqtigeeda, Dibiga ayaa la cabiraa maalin walba heerkulka. Heerkulka jirka caadiga ah - 38-40 digrii. Haddii la ogaado habsocodsi barar ah, waa la daaweyn doonaa. Hernia si toos ah uguma hanjabin caafimaadka kubka, laakiin waxay keeni kartaa cawaaqib xumo, marka, marka calaamadaha jirro muuqdaan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu marti qaado dhakhtar xoolaad.